Ahoana no Hihena ny tadidinao amin'ny WordPress Site - ITS Techschool
Noho ny tsy fahafahana nahazo dolara iray isaky ny misy olona nilaza na nametraka fanontaniana momba ny taham-pitenenan-tseraserantsika, dia mety ho marika isika. Izany hoe, be dia be no voalaza, namorona sy nahazo fampahalalana momba ity "biby" metric metric ity izay toa manjavona ny iray sy ny rehetra.
Amin'izay fotoana izay dia tokony hiahiahy anao ny tebiteby
Fa maninona no manatsara ny fihenam-bidy amin'ny tranokalan'ny WordPress?
Reduced rate rates on your WordPress site
Ny tahan'ny fisalasalana dia metisy mahafa-po
High Rate Bounce dia ratsy ho an'ny WordPress SEO
Tsidiho ny vidin-tsolika amin'ny tranokala WordPress
Tsindrio ny fifamoivoizanao
Ampitao haingana ny Site WordPress
Ampitao ny tranonkala Navigation amin'ny tranonkala
Ampitomboina ny votoatinao mba hampihenana ny fihenam-bidy
Ampitao ny dokambarotra SEO sy PPC
Tadiavo ny sanda sy ny fifandraisana
Alaharo ny rohy mifototra
Hampiditra lahatsoratra mifandraika amin'izany
Na izany na tsy izany, azo heverina fa raha jerena ny fisian'ireo peeps maro izay mipoitra rehefa miverimberina amin'ny tsipaipaika dia tsy manana ilay hevitra foggiest momba ny zavatra iray momba ilay fanevatevana malaza, na angamba na inona na inona asa hafa mahazatra toy izany . Fahamarinana ny naivety izay mipetraka ao amin'ny tranonkala. Tahaka ny mampalahelo izany satria mahatsiravina izany.
Ity misy sombim-pahaizana marina: Ny tahan'ny Bounce no tena isan'ireo olona mandao ny tranokalanao nefa tsy mamerina mamaky pejy hafa ankoatra ny pejin'ny andininy. Mibaribary be? Tokony hanainga ny fonony amin'ny tsiambaratelo avy amin'ity biby ity isika izay antsoina hoe farafaharatsiny ho an'ny farany.
Ahoana ny fomba hanajantsika ny sasantsasany izay mandresy lahatra ny mitady "WordPress specialist" ao amin'ny Google, ary ny tranokalanao dia tonga eo anivon'ireo folo voalohany (10) tonga amin'ny ankapobeny raha jerena ny fanapahan-kevitra noraisinao taorian'ny fomba fanao tsara indrindra WordPress SEO. Koa satria ny sangisangisangotra hoe "Ahoana no fomba hifidianana ny mpanolotsaina WordPress tonga lafatra" dia mijery misaotra mendrika ny sarin'ny meta izay nanohanana an'i Google ianao, dia miverimberina mankany amin'ny tranokalanao izy ireo. Ity fidirana bilaogy manokana ity dia lasa ao amin'ny pejinao, na "fizarana" fotsiny.
Na ahoana na ahoana, rehefa tonga any amin'ny tranokalanao izy ireo, dia mahita fa tsy ny zavatra andrasany no azon'izy ireo, noho izany dia mamely ny lamosina izy ireo, mametraka URL hafa na mamoaka ny PC amin'ny varavarankely. Ity hetsika tsotra ahafahana mamela ilay pejin'ny tsipika tsy mampifandray amin'ny sisa tavela amin'ny tranokalanao ity dia fantatra amin'ny hoe bounce.
Rehefa manara-maso ireo sangisangy ireo ianao aorian'ny fotoana fohy, ary aorian'izany dia mifanohitra amin'izy ireo ny isan'ireo olona izay nandeha tany amin'ny tranokalanao, dia mahazo ny ampahany. Ataovy fampandrenesana ny ampahany amin'ny fepetra ary manana taham-pifandraisana ianao.
Azonao atao ny mamaky ity bit of math ity. Ity ny fomba fijery feno hatsaram-panahy mba hanehoana tsara ny hevitra, Mieritrereta hoe ny mpanolo-tsaina WordPress anao dia nahazo ny vahiny 1,000, ary ny 750 dia miala avy hatrany raha vao mijery ny lahatsoratra,
750 / 1000 = 0.75 = 75%; Tombon'ny Bounce = Bounce / Total Visitors x 100%
Koa satria manana ny "inona" eo amin'ny lalana nafotaka izahay, oviana no tokony hikorontana anao? Nandritra ny fanaovana ireo karazam-pirazanana nentiko dia nandeha namakivaky fitaovana tsara tarehy nosoratan'i Neil Patel aho izay nahitana ny halavam-pandrefesana ho an'ny vidin'ny balafomanga. Ny famaranana ny tetezamita dia andian-tserasera amin'ny taham-pitenenana avo lenta toy ny 98%, nodiovina tamin'ny pejy miarahaba amin'ny 70 - 90% sy ny votoatiny ao amin'ny 40 - 60%. Nivory tao amin'ny 30 ny tranokalan'ny vanim-potoana - antsasak'izay, nodiavin'ny toeram-pivarotana antserasera ao amin'ny 20 - 40% ary nodiavin'ny tale mpanatanteraky ny 10 - 30%.
Amin'ny ankapobeny, tokony ho voatsikera ianao raha mihoatra ny 60% ny tebitibinao WordPress. Ny antsasany dia lehibe, na dia eo aza ny tranga izay azonao omena eo ambany 10%, mahagaga ianao. Andramo ny tsy fijerena ny fahitana kanefa, tokony tokony handavaka (na hieritreretanao) ny soso-kevitrao manohitra ny fampiratiana voarakitrao.
Ohatra, noho ny vintana tsy fantatrao izay efa nosoratanao tamin'ny sanda 95%, dia nampidirina izany avy eo amin'ny 65% raha oharina amin'ny fepetra fanavaozana ny fepetra fanavaozana, ohatra ireo, izay hokarakarainay eto androany, tokony hianjera ny foza Fa izany dia fiovana tsy mampino, na dia eo aza ny 60%.
Mandritra izany fotoana izany, tokony tokony hitadidy fa misy karazana WordPress ao an-toerana, ary na dia ny votoatiny aza, izay hanan-danja avo lenta raha resaka mazava. Fanehoana mendrika iray dia tranonkala WordPress iray pejy. Ny tranga iray mety hanan-danja avo lenta dia sombin-dahatsoratra izay tsy manosika pejy hafa. Ny tranonkala, ohatra, ny references amin'ny teny an-tserasera dia mety misy ihany koa ny sanda avo lenta, satria ny mpanjifa amin'ny fitsipika dia tsy manindry ilay pejy izay ahitana ny famaritana izay tadiaviny.
Tsarovy ny iray amin'ireny fiheverana ireny rehefa manapa-kevitra ny taham-pihetseham-batana. Na inona na inona antony, ny antony sy ny tanjon'ny rehetra dia 60% ny taham-pidintsika. Ambonin'izany, any amin'ny faritra mety hampidi-doza ianao. 40 - 60% ianao no velona, ​​10 - 40% manao ny tsara, ary <10%, mendrika ny famolavolana.
Nahomby tokoa izahay ny amin'izay sy ny fotoana. Na ahoana na ahoana, nahoana no mety ho hevitra tsara ho anao ny miezaka be amin'ny fitifirana tsotsotra amin'izany? Nahoana no ilaina ny mitazona ny sidina ambany tsy hay hadinoina? Ho haingana aho, mba hahafahantsika mahazo ny fandaharana toy izao.
Asehoy ahy ny tranonkala misy tifitra avo lenta, ary hampiseho aminareo toerana misy mpanjifa diso fanantenana aho. Ankoatra ny toerana misy ny pejy iray ao amin'ny pejin-tranonkala, ny Internet Dollar, ety anaty aterineto, ny tranonkala miaraka amin'ny taham-pitenenana avo lenta dia midika hoe fidiran'ny mpanjifa mahantra.
Raha mbola kely dia kely ny teboka, dia mahavita zavatra tsara ianao, ary tokony ho betsaka ny zavatra ataonao. Raha toa ka avo loatra ilay izy, tsy maintsy miara-mipetraka ny tokantranonao ianao fa ny fifaneraseran'ny mpanjifa dia miara-miasa tsy azo sarahina amin'ny ...
Noho ny tombony ho azonao avy amin'ny tranonkalanao WordPress, dia mila miova ireo vahiny tsy manan-tsahala amin'ny mpilalao tsotra, mpanjifa, na mpikamabana mahatoky sy mahitsy. Hahafinaritra anao ny fotoana hahatanterahanao izany raha tsy mijery ny sisa tavela amin'ny tranokalanao ny olona. Raha ny tranga rehetra ataon'ny olona tsirairay ao amin'ny pejy fanoloranao dia mialokaloka, efa very ny toerany.
Mitaky ny fanantenanao ianao mba hisintonana azy ireo fifandraisana sy soso-kevitra hanatanterahana ny trangan-javatra raha toa ianao handoa ny faktiora. Ny taham-pitenenana ambany dia marika azo antoka fa tsy mamela ny tranokalanao avy hatrany izy ireo tonga. Ny mifanohitra amin'izany dia mitoetra tsy ankiato.
Fanamarihana: Mety manana taham-pitenenana avo lenta ianao ary fanombanana ny fiovaovana mahatalanjona.
Tranga mendrika iray dia tranonkala WordPress iray pejy izay mangataka ny antso ho anao. Raha toa ka misy olona 1000 mivoaka ao amin'ny pejiny, ary niantso anao 800, dia mitazona ny sanda 80% ianao raha tsy misy ny fahafaha miditra amin'ny 100%.
Tranga iray hafa: Aleo lazaina fa mbola alefanao ny entanao, ary mandra-pahatapitry ny pejy fanoloranao, dia mampifandray ny fifandraisana amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy ianao mba hitombo vondrona iray. Azonao atao ny mamolavola ny famolavolana ny vondrona anao, na inona na inona mety hitranga amin'ny tranokalanao dia mitaky taham-pidirana ambony.
Na izany aza, raha toa ka ny CTA dia misy ny fanantenana amin'ny pejy hafa ao amin'ny tranokalanao (ohatra fangatahana na fifanarahana), dia tsy afaka manana fiovan'ny toetr'andro ambony ianao. Tsy afaka miara-mivory ny roa - afo sy rano.
Ho an'ny fotoana rehetra izay niarahan'ny mpanjifanao miaraka amin'ny pejinao amin'ny iray amin'ireo fomba nirinao, dia manana fiovana ianao. Amin'ny làlana tsy mety hialàn'izy ireo raha tsy miara-miasa amin'ny sisa tavela amin'ny pejy mifandray aminao, dia hanana farafahakeliny avo be ianao. Mandritra izany ...
BAM! Ireto misy zavatra tokony hipoitra ampy mba hahamarika. Inona? Ny olona dia hiala amin'ny zavatra rehetra ataony ary mifantoka rehefa mamaritra ny SEO. Izany dia noho ny, raha tsy misy ny "hetsika maimaim-poana" avy amin'ny mpikirakira ny tranonkala, inona ny tahan'ny fanovana sy ny fidiran'ny mpanjifany?
Arahabao, afaka mivezivezy fotsiny ianao avy amin'ny loharano samihafa, na dia amin'ny fotoana tsy ampiasanao SEO aza, dia mahatsapa ny fahaverezan-tsainay amin'ny asa goavana izahay. Tena mandao ny latabatra ianao.
Nahoana? Voalohany indrindra, ny ankamaroan'ny fikambanana dia manana vondron'olona goavana amin'ny Internet. Mazava ho azy fa tianao ny tsy hohadinoina. Ankoatra izany, ny mponin'ny ankamaroan'ny olona mikaroka fandaharana amin'ny alalan'ny fitaovan'ny tranonkala dia ny mpividy indrindra. Noho izany tsy isalasalana fa ny SEO dia tena ilaina. Ankoatr'izay, ny sanda avo lenta avo dia tsy ny fomba hanamboaranao ny seho SEO mahery.
Ity no fomba izay handikana ireo bibikely Google handika ny isa avo lenta: Mandao ny tranokalanao ny olona haingana dia tonga amin'ny fahatakaran'izy ireo fa tsy misy idiranao ianao. Tsy manome valin-kafatra ianao, noho izany dia tsy mendrika ny toerana mahafinaritra SEO ianao. Ny zava-drehetra dia heverina, ny tranokala WordPress dia atosika any ambadika, ary ny mpanohitra no maka ny toeranao, ary ny asany. Ny taham-pitenenana avo dia tena mahatsiravina tokoa.
Manana ny laharana voalohany isika. Amin'izao fotoana izao dia tokony hanao zavatra isika. Tsy ho ela dia hikorontana io teboka avo lenta io, izay ankoatra ny lalanao mankany amin'ny fahombiazany an-tserasera. Alohan'ny hanohizantsika, dia hamporisika anareo aho hamerina haingana ireo toro-hevitra ireo, fa tsy mamaky azy ireo fotsiny. Asa tsotra, ary satria manamafy orina ny Business WordPress izahay, dia tokony hanana fotoana tsara ianareo mandritra izany. Avy hatrany dia eto izahay ...
[Fandalinana ny fivezivezintsika] dia manome antsika ny fanalahidy manan-danja izay mitondra ny fampivoarana ny zavatra ao amin'ny fampiharana sy ny efitranontsika. Izany dia manondro antsika ny fomba ampiasain'ny olona tsirairay ny mombamomba antsika tsirairay. - Jeffrey Fluhr, CEO SpreeCast
Izany ve no fotoana fohy sy lava? Ahoana no handaozanao ny taham-pivoarana eo amin'ny tranokalanao WordPress amin'ny lozanao tsy fantatrao hoe aiza no misy ilay olana? Ny fikarohana kely dia tsy manampy anao hametraka mazava tsara hoe nahoana ianao no manangona ny taham-pifaninanana.
Azonao atao ny mandray anjara ianao! Ny velarantanin'ilay tanàna dia 208,431 kilometatra toradroa. Angamba ny tombontsoanao dia tsy mandrindra ny an'ireo mpanaraka anao. Moa ve ny fialantsinao ambony amin'ny fifandraisana amin'ny vahiny na vahiny? Angamba izany dia zavatra vaovao; Ny tranonkala dia manala ny mpanjifa portable.
Mety ho zavatra izany. Ny taham-pitenenana avo be dia mety hanamboatra farafaharatsiny ny singa iray, saingy tsy ho fantatrao na oviana na oviana raha tsy mifantoka amin'ny asanao ianao. Noho izany, mila fitaovana fanadinana ianao, ohatra, Google Analytics, Piwik, Crazy Egg, Clicky, ary Trends ao amin'ny Internet fotsiny mba hilazàna mpivady.
Eritrereto ny zava-drehetra avy amin'ny socioeconomics mankany amin'ny faritra, ny fitondran-draharaha, ary ny teny filamatra vahiny ampiasaina amin'ny fomba samihafa. Eritrereto izay mety rehetra amin'ity dia ity - tokony hanana ny fomba fijery rehetra momba ny asa ataonao eo amin'ny rantsan-tànanao ianao. Izany no zavatra nampianarin'ny mpahay siansa momba ny Chemistry ahy hampahafantatra anay - manana ireo zavatra ireo eo amin'ny rantsan-tanana, na miditra an-trano ary mifidy amin'ny polytechnic. Haha, toe-javatra lehibe tranainy.
Mandritra iray minitra, ahoana ny fomba amoahantsika io fanodikodinam-piainana io ho toy ny fitiavan-tena manontolo. Alaivo sary an-tsaina hoe mitady ny fiara farany indrindra Audi ianao. Audi a4 tena maoderina maoderina hentitra. Tsindrio fa toy izany ihany koa ny vokatra fototra ao amin'ny Google dia tsy ny tranokalan'ny authentic Audi, satria tena haingana ny zaza.
Tena marina tokoa fa ianao no manosika an'io biby io hanidina ity fiaramanidina ity amin'ity herinandro ity manomboka izao. Noho izany dia mandehana any amin'ny Google ianao, mitady Audi A4, ary ny mety hisian'ny "newcars15.com" izay mitaky fotoana maharitra, ary ny fiaramanidina manodidina ny universe. Hikorontana ve sa handany ny $ 30,000 ianao any amin'ny toerana hafa? Fantatro fa tsy hihazakazaka aho, arakaraky ny fisian'ny tranonkala miadana dia afaka manaisotra tanteraka ny fiainanao.
Alaivo sary an-tsaina ny tsirairay amin'ireo minitra tena sarobidy ireo. Ankoatra izany, inona ny fanomezan-toky azonao any Audi A4 iray herinandro manomboka izao avy amin'ny newcars15.com raha maka mandrakizay ny tranonkala? Mankasitraka, azoko entina lavitra loatra izany, kanefa noho izany dia eo an-tokontany izay eritreretiko tonony iray azonao omena ny teboka, izay ho an'ny toe-javatra misy antsika: Ny tranonkala mandanjalanja dia hanana fanentanam-panahy mety hikorontan-doha noho ny fahitan'izy ireo anao 'manainga. Nifanindran-dàlana tamin'ity raharaha ity amin'ny fomba Ahoana no hametrahana ny WordPress Page Load Time, noho izany dia tsy hiditra ao anatin'ireo teboka misy tombotsoa aho.
Manana an'ity zaza ity isika amin'ny fitaovana fahadimy amin'izao fotoana izao, ary mbola mila mamono ny valan-javaboary isika. WordPress tranonkala, ahoana no iantsoana ity sombin-tsolika ambany ity? Izany no fototra; Toy ny mpitari-dalana (na marika famantarana) izay mitarika ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny tranonkalanao, ny rafitra an-dalamby mahafinaritra.
Mandeha any amin'ny Google i Mary Jane amin'ny tolotra mba hitadiavana ny lohahevitra maro samihafa amin'ny tenimiafina matihanina amin'ny WordPress. Noho ny habetsahan'ny endri-pihetseham-po nasehonao nataonao tamin'ny fanaovana blaogy matihanina, ny lahatsora-piteninao "20 Best Responsive WordPress Themes for 2015" dia miseho voalohany ao amin'ny Google, ary miverina izy.
Manararaotra ny lahatsorany manontolo izy, ary avy amin'ny faniratsiram-pitiavana no mifidy ny mijery ny lohahevitry ny WordPress izay azony alaina avy amin'ny lohatenin'ny lohapejy, sidebar na footer. Na inona na inona mety hitranga tsy hividy ny loha-hevitrao, tsy handinika ny tsikombakomba izy.
Ankehitriny, manadino an'i Mary Jane. Diniho ny John Doe izay nahita ny tranokalanao fotsiny (amin'ny alalan'izany) ary mila mamantatra angon-drakitra. Mora toy inona ho an'i John Doe ny mijery ny votoaty ao amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny rafitra misy anao? Heverinao ve fa hifikitra amin'ny zava-misy izy ka tsy ho hitany ny zavatra tadiaviny?
Ny rafitra maotera tsara indrindra dia sarotra ny mampiasa. Zava-dehibe sy mazava izany, izay manampy ahy hahatsiaro io fotoana io no nitadiavako fampiharana fampianarina Java. Noho izany dia tonga teo amin'ny tranonkalan'ny hajaina aho noho ny fikambanana iray ara-drariny (tsy misy anarana mitatao, tsy misy dikany).
Ny tranokala dia nahitana drafitra miavaka sy manan-talenta. Mifanakaloza hevitra momba ny karazana tranonkala izay azonao itokisana mba hifidianana ho toy ny fahatarana. Na izany na tsy izany, talohako dia naka tsiloka aho tamin'ny fahazoana ny fanabeazana Java fanabeazana maimaim-poana izay tokony handraisanao tsipiriany, fantatrao, mitovy amiko.
Ny tantara lava dia fohy, ny fampiofanana fampianarana dia nitodika tamin'ny ambaratonga vitsy tao amin'ny sakafo menamena, ary naka fotoana betsaka tokoa aho noho ny antony ilainy eo amin'ny sehatry ny maha-marary sy marary ahy, ary tsy manam-paharetana aho mba hitady ny fampianarana ara-dalàna Java fanatanjahan-tena. Na ahoana na ahoana, dia nahatsapa ho sahiran-tsaina aho tamin'ny fandalinana tamin'ny alalàn'ny fandalovan'ny olona mba hikaroka irery, izay tsy nahatonga ny foto-kevitra momba ny faniriako ny zavatra rehetra. Meh. End of tirade.
Ny olona tena manahirana dia tsy hanana hery ampy hijerena ny làlanao manontolo ho an'ny tombontsoa ilainy. Ataovy izay mety hitranga amin'ny fomba tsotra, izay mora mitranga amin'ny alalan'ny rafitra misy anao, ary tsy maintsy isalasalana fa hidina ny sanda. Moa mikasa hamono ahy ve ianao? Ity ny entana:
Ataovy mahitsy ny lalana
Mijery zava-mahatalanjona ireo menaka super, nefa tena takinao ve izany?
Manampia sitemap ao amin'ny tranokalan'ny WordPress. Azonao ampiasaina ireo modules, ohatra ny Google XML Sitemaps, na ampiasao lohahevitra iray izay mipetraka sitemaps
Ampio menus ianao ho any amin'ny lohateninao, tongopeana ary sidebar
Ampidino ny kilasy, ny rakitra ary ny labels eo amin'ny sidebar
Ampidiro ny boaty fitadiavana ho gadjika fiarovana dia tokony hianjera ny menuso anao. Ny boaty fanontanianao koa dia afaka manatsara kokoa ny rafitra misy anao sy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. Ampiasao ny môdarka, ohatra, Relevanssi mba hamoronana sehatra goavana sy marina amin'ny Internet ho an'ny tranonkala WordPress
Rehefa mankao amin'ny toeram-pivarotana lehibe ianao, mandanilanao ny fotoananao any amin'ny toeram-pivarotana izay manisy tadiny mahatsiravina na manamboninahitra? Tsy manantena anao aho, raha tsy ianao no tompon'ny tranokala toy izany, izay mety hampisalasala.
Ny voka-dratsiny dia handefa haingana kokoa ny mpanenjika anao noho izay azonao raisina. Ampahafantaro ahy, ho lazainao ve fa hampiasa vola be ianao handresena ny voka-dratsin'ny mahantra rehefa misy karazan-javatra hafa mahafinaritra hatao ao amin'ny tranonkala? Fantatrao, tahaka an'i Cheezburger, mampihetsi-po ireo horonantsary malaza ao amin'ny YouTube, ary nyCHIVE miaraka amin'ny hafa. Inona no mahatonga ny mahantra?
Stale venty - Aza avela hanavao ny votoatinao
Fotoana fikarakarana sy tombanana tsy misy - Ny sary iray dia singa iray dia 660px amin'ny sakany, ny manaraka dia 350px
Adikao amina kopy - Mampiditra sary. Fampahalalam-baovao ho an'ny tompony, ary tsy misy dika mitovy velively. Tsy ara-dalàna izany.
Alaina ary manoritsoritra ny votoatinao amin'ny antony mahatonga ny fijerin'ny blaogy amin'ny endriny sy ny fomba fijery tsy dia tsara loatra dia tsy mampiahiahy fotsiny
Ary koa, manandrama hanatsara ny fanapaha-kevitry ny votoatin'ny WordPress blogo. Ny votoatiny azo atonina dia hampirisika ny olona hivezivezy amin'ny pejy mifandray
Lohateny sy lohateny
Loha-hevitra lehibe kokoa
Fahasamihafana tsy mahazatra izay heverina ho mason'ny maso (mijanona amin'ny fikorontanan'ny teboka roa na telo)
Toerana feno fotsy
Sary tsy mahazatra
Fampahalalam-baovao tsy mahazatra
Rehefa manao ny mozika ao amin'ny WordPress ianao, dia ahitanao ny sokajy sy ny mari-pamantarana, ka mety hahitanao ireo hevitra mifandraika amin'ny fanenjehana hafa. Mieritreritra ny hitazona ny blôginao amin'ny alàlan'ny fanavaozana farany indrindra hatramin'ny fanamafisana ny fifikiran'ny mpanjifa sy ny SEO.
Ankoatra izany, dia manoritsoritra ny vondron'olona mahaliana anao manomboka amin'ny fiantombohan'ny fanomezan-toky fa mifantoka amin'ny fanangonana marina ny olona ianao. Ny hafa kosa dia hampahiratra ny masonareo, hianjera ianareo ary hikorontana amin'ireo taham-pahefana ireo.
Ny ezak'izy ireo rehetra dia ny hampihenana ny taham-pivoarana eo amin'ny tranokalanao WordPress dia tsy misy dikany raha tsy mifantoka amin'ny fifamatoran'ny olona amin'ny toe-javatra rehetra. Raha toa ka zaraiko ny hizara tantara mikasika ny toerana nihalehibe teo amiko, Meru, Kenya, dia hampiasa tetik'ady SEO eo an-toerana aho mba hiantohana fa tsy manenjika ireo mpikomy aho hitady Mt. Meru any Tanzania ohatra. Fomban-drazana Tiako ny tsy hisintona ireo mpikomy amin'ny fitadiavana taxi Meru any India na mpanjifa mitady ny Meru Networks izay any Tampa, FL.
Amin'ny làlana tsy nampoiziko ny olona rehetra afa-tsy ny vahoaka manerantany izay tena liana amin'ny toerana nipetrahako, ny tranonkalan'ny WordPress hiditra an-tsoratra ny sanda avo lenta - hatramin'ny nifantohako tamin'ireo mpihaino diso.
Mandeha ihany koa ny PPC izay mampiroborobo ny ezaka. Amin'ny fotoana tsy ahafahanao mifantoka amin'ny ratsy, ianao dia handoa vola amin'ny zava-drehetra afa-tsy amin'ny hetsika izay takinao. Ny fitsangatsanganana SEO sy ny PPC dia tokony hotarihina amin'ny fandinihan-tsika fohy. Ampiasao ny fijerena teny filamatra momba ny fitaovana, ohatra ny Google AdWords Keyword Planner, Word Tracker, Yoast Suggests ary ny KWFinder.com.
Andramo ny tsy hoeritreretana ireo teboka mahaliana, na izany aza, manana ny ambiny isika amin'ny fiarovana ireo WordPress SEO Best Practices ho an'ny 2015 sy ny maro hafa. Araho ihany koa fa manohy ny fametrahana ambony indrindra amin'ny teny rehetra marihinao ianao toy ny sary na ny anaranao.
Miaraka amin'ny taham-pidirana, dia misy ny zavatra maro azonao atao mba hamehezana ny fifandraisanao ary ahafahanao mametraka ny tranokalanao ho toy ny loko. Ny fanarenana ny fifandraisana tapaka, ny fampivoarana ny paikady mifandray amin'ny fifandraisana ary ny fanokafana ny aterineto dia miditra amin'ny tabilao dia fomba mahomby hanombohana.
Ny vahiny hafa dia afaka miditra ao amin'ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny pejy web na lahatsoratra. Na ahoana na ahoana, raha toa ka tapaka ny fifandraisana amin'ny tranokalan'ny WordPress anao, dia tsy hahita ny angon-drakitra hitadiavanao azy mihitsy ny hoavinao, ary noho izany, mameleza ny traikefa. Amin'ny tsy fahafahana manohy manenjika ny fisamborana indray, dia hampiditra sanda avo lenta izay fanapahan-kevitra mora ianao.
Azonao atao ny manamarina ny tranonkalanao WordPress ho an'ny fifandraisana tapaka mampiasa môdea, ohatra, Broken Link Checker. Na tsara kokoa aza, afaka mampiasa ny fitantanana an-tserasera ianao, ohatra, ny W3C Link Checker. Ny tsara indrindra dia ny mametraka ny fifandraisana rehetra tapaka eo anelanelan 'ny batao mba hampitsaharana ny fanjonoana lava' mialoha.
Na izany aza, inona no tokony hatao rehefa misy fifamatorana manakaiky ny fotoan'ny hariva noho ny fikorontanan'ny hetsika na antony hafa? Raha ny marina, tsotra izany - azonao atao ny manohitra ity olana ity amin'ny alàlan'ny fanaovana pejy 404 na familiana fifandraisana tapaka ho an'ny tombontsoa tianao, ohatra, ianao ny pejy misy anao na izay pejy hafa tianao.
Ity ny fomba hanaovana pejy custom 404 amin'ny WordPress ary eto dia modely tsotra 301 Redirects mba hanampy amin'ny raharaham-barotra.
Ny fijerena ny taham-pitenenana dia ny tahan'ny vahiny izay miala amin'ny pejin'ny fizarana, ary ny fampidirana ny fifandraisana eo an-toerana ao anaty fananana dia afaka manery vahiny maromaro kokoa hikirakana ny pejy voalohany. Amin'ny fotoana fohy izay ahafahanao mahazo blaogy mahavariana izay mamerina ny zavatra ataonao, mampifandray azy amin'ny pejy samihafa, ny toerana misy ny fahatongavanao.
Ireo olona tsy vonona ny hanongotra ny fandrika ao amin'ny pejy miarahaba anao dia mety mila manadihady ny tranokalanao. Ny fampifandraisana amin'ny fananana mahazatra dia mahatonga azy ireo ho tsotra ho an'izany. Rehefa mivezivezy izy ireo, dia mihena ny taham-pidinao.
Sokafy ny rohy ivelany amin'ny rakitra vaovao
Nialoha ny fisavana voafantina dia nivadika ho zava-misy, ny fanokafana ny fifandraisana ivelany amin'ny varavarankely vaovao dia tsy nankasitrahan'ireo mpanjifany satria nanimba ny fihaonana mpanjifa. Tahaka izany angamba, satria ny fiheverana voamarika, ny fanivanana ny tranonkala miaraka amin'ny toerana maro isaky ny fotoana misokatra dia lasa mora sy mora ary mahafinaritra mihitsy aza.
Androany, tsy tokony hisalasala ianao hanokatra ny fifandraisana ivelany rehetra amin'ny tabilao vaovao, raha tsy hoe mazava ho azy, ny mpanjifanao dia manaiky programa taloha izay tsy manohana tabs. Ahoana ny fanokafana ny fifandraisana ivelany amin'ny tablety vaovao hamoaka ny sanda fampidinana ao amin'ny tranokala WordPress?
Avelao lazaina hoe efa nanao blaogy lehibe ianao, ary mifandray amin'ny vola azo ampiasaina amin'ny tranokala hafa. Raha toa ka misokatra toy ny varavarankely / tab, toy ny nomerao siantifika momba ny siansa ireo fifandraisana ivelany ireo. Na izany aza anefa, raha tsy manokatra fifandraisana ivelany amin'ny tablety vaovao ianao, dia afaka miditra any ivelan'ny trano ianao raha tsy miala amin'ny tranokalanao. Raha toa ka mampiditra fifandraisana ivelany, dia jereo ny "Fifandraisana misokatra eo amin'ny varavarankely iray hafa / fisaka" aseho toy izao manaraka izao:
Ampiasao ny tranokalanao WordPress
Fihetseham-po amiko eto: Moa ve ianao hifikitra (ary hiara-miasa) tranonkala iray izay toa niasa tamin'ny faha-fahadimy fahadimy? Raha toa ka tsy tsara noho ny salan'isa ny tranokalanao, dia tsy azonao an-tsaina fa ny olona dia hijanona ela be mba hividianana izay atolotra.
Amboary ny loharanom-pamokarana amin'ny sehatra fiasa matihanina, ohatra, ny iray amin'ireo karazana WordPress samihafa samihafa. Ankoatra izany, azonao atao ny manaparitaka lohahevitra mahaliana sy mahafinaritra amin'ny WordPress.org na mpivarotra, ohatra, Themeforest sy Elegant Themes.
Azonao atao koa ny manangana ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Word class developer pejy voalohany, ohatra ny Visual Composer na Beaver Builder mba hilazana fa mbola misy mpivady ihany. Azonao ampiasaina koa ireo lohahevitra matihanina mahafinaritra izay manaraka ny lohahevitry ny lohahevitra amin'ny WordPress, ohatra, Genesis na Dika.
Amin'ny vintana tsy misy na inona na inona afa-tsy misy safidy hafa mahasamihafa feo hafa, ary manana vola ianao hamonjena, eritrereto ny hikolokoloana ho toy ny WordPress top designer mba hamoronana anao indrindra ny zavatra takinao (tsarovy fa ity matetika no safidy sarobidy sy sarotra indrindra Saro-tadiavina ny fomba fametahana ny tenanao).
Raha manavao ny tranonkalanao, eritrereto ny hampiditra fanamarinana ara-tsosialy; adiresy maro, mpankafy, fanomezam-boninahitra - izay rehetra mitantara ny mpanjifa hafa dia mankamamy ny zavatrao. Raha toa ka tsy manana tarehimarika marobe ianao, dia mandefasa ny fanamarinana ny fanamafisana ara-tsosialy mandra-pahatongan'ny fotoana hafa fa mety hampihena ny fitokisan'ny mpanjifa ny tarehimarika ambany, na dia tsotra fotsiny aza ianao.
Ampiasao ireo pejy miarahaba anao amin'ny fampiasana test de l'A / B sy ny fitsapana. Zavatra iray tianao tsy hiseritreretina dia ny CTA dia ahitana faritra mazava sy misongadina amin'ireo pejy miarahaba anao. Tokony ho ampy ny telo amin'ireo trangana CTA; Iray haingana teo amin'ny mainty, ny iray eo afovoany ary ny farany farany mankany amin'ny fotony.
Mbola eo am-panaovana ny fandraisana ny fandraharahana, manaova takelaka hiarahabana ho an'ny vondrona samihafa fijerin'ny mpijery anao. Ampiasao ny voka-bary mahatalanjona sy ny tohodrano fanampiny amin'ny fotoana rehetra hahatongavana amin'ny fanangonana manokana ny olona.
Miverina any amin'ny tranokalan'ny fanavaozana, ny fanamafisana ny lalan-dàlana, na amin'ny hoe Maya Angelou (Andriamanitra anie hamerina ny fanahiny amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay) dia nilaza hoe, "Ny fihenan'ny fandrosoana dia tsy misy ezaka tanteraka."
Mila manao tranokala manan-karena sy manankarena izay hisarika ny ho avy amin'ny trawls? Amin'izany fotoana izany dia mila mametraka azy io ho sarotra sy tsotra indrindra amin'ny fampiasana tranonkala ao amin'ny tranonkala. Manomboka amin'ny fametrahana singa tsy misy dikany izay tsy manohana na mameno ny zavatra ilainao.
Ankoatr'izany, mitazona elanelana ara-stratejika amin'ny popups sy ny fampiroboroboana. Ankoatr'izay, miantoka ny dokam-barotra izay ampiasainao ao amin'ny tranokalanao WordPress dia manan-danja ho an'ny votoatiny sy ny fahaizanao manokana. Asio fampisehoana manan-danja eo amin'ny sisin-dàlana, ary amin'ny toe-javatra izay azonao atao, mitazona elanelana ara-stratejika amin'ny fisehoana ivelany sy ny dokam-barotra.
Amin'izay rehetra lazaina sy atao, dia miantoka fa ny tranokalanao dia mamaly mba handinihana ireo birao sy ny mpividy isan-karazany. Fidio ny valin'ny WordPress valiny, (ohatra, Total) hatramin'ny voalohany. Miantoka koa ny môsialy izay azonao amidy ho an'ny finday.
Ilaina ny handroso ny pejy? Amin'io fotoana io dia ataovy tsotra ho azy ireo ny hahitanao ny habetsahana betsaka kokoa. Azonao atao ny mametraka gadget mifandraika amin'ny endriky ny fidirana ao amin'ny blôginao na eo amin'ny sisindranonao - mba hiantohana tsotra izao fotsiny ny mpijery anao. Fanavaozana vaovao dia tsy mila manao fanandramana maotina ianao, misy endri-tsoratra tsy misy endriny WordPress manome modules amin'ny fanampiana amin'ny asa tena sarotra.
Na dia eo aza izany dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fiatombohan'ny valantserasera amin'ny fanombohana, ny bilaogy fanamarihana dia afaka manampy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa mandritra ny fotoana lava, izay mampiakatra ny taham-pidirana. Rehefa mitazona ny mpanjifanao miditra ao amin'ny sehatra bilaogy ianao, dia tsy isalasalàna fa izy ireo dia mino bebe kokoa, hampiasa hery bebe kokoa ao amin'ny blôginao ary manolotra ny votoatinao amin'ny hafa.
Momba ny fanolorana ny hoavinao ny raharaha tahaka ny tsy misy hafa ao amin'ny tranonkalanao - momba ny fiverenana ao an-tsainao sy ny andrasana eo amin'ny saha nofinao.
Rehefa mandrindra ny drafitr'asanao ianao, miaraka amin'ny votoatinao sy ny zavatra, ary aorian'izany dia manangona ny zava-drehetra ao amin'ny drafitra any an-danitra, dia tsy misy na inona na inona hisakana anao tsy hampihena ny vidin'ny WordPress.
Araho ireo torohevitra napetraka etsy sy eroa androany, ary tokony hanan-tsofina hizara, na fanontaniana hikolokolo, azafady, aza misalasala ny hampiasa ilay faritra fanamarihana etsy ambany. Tianay ny handre ny eritreritrareo - veloma!
8 manan-danja CISCO CCNA Training & Cisco Certifications